Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီဤတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရောက်ရှိပေါ်မှာရှိသမျှအချိန်များမှာ! .. နယူးအဝေးပြေးခွန်ကောက်, တံတားနှင့် YHT အခကြေးငွေများ
ဤတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရောက်ရှိပေါ်မှာရှိသမျှအချိန်များမှာ! .. နယူးအဝေးပြေးခွန်ကောက်, တံတားနှင့် YHT အခကြေးငွေများ
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, 26 Eskisehir, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 42 Konya, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ငါ t ကိုအစဉ်အဆက်သို့ရောက်ရှိဖို့လာချင်
ဤတွင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရောက်ရှိ! .. နယူးအဝေးပြေးခွန်ကောက်, တံတားနှင့် YHT အခကြေးငွေများဖြစ်ကြသည်။ လျှပ်စစ်မီး, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ခွမရနိုငျတဲ့သူနိုင်ငံသားတွေ၏ထိတ်လန့်ကျော်ထ; အချိန်ကိုအားဖြင့်စာပို့ခတုန်လှုပ်သောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်တံတားဖြတ်သန်းခကို၎င်း, YHT ဆင်ခြေဖုံးရထားလက်မှတ်။
ဘတ်ဂျက်အတွက်အဝေးပြေး, ရထားလမ်းနှင့်စာပို့ခနိုင်ငံသားများ xnumx'lik ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးမြှင့်အသစ်တစ်ခုကိုပေါက်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီများသည်အတွက်ကိုတိုးမြှင့်သေဆုံးသူမရှိသံသယပြီးနောက်စျေးနှုန်းအသစ်တခုညှိနှိုင်းမှုစေမည်။
အစ္စတန်ဘူလ်သွားပုဂ္ဂလိကကားတစ်စီးထက်ပိုစျေးကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး zamla Izmit တစ်ဦးတံတားဖြတ်ကူးဘို့အ 6, 10,5 £လစာနှုန်းကားတစ်စီးမောင်းသူအဝေးပြေးလမ်းမကြီးÇamlıca output ကိုများအတွက်အနောက်အစ္စတန်ဘူလ်ကနေလာမယ့်။ ဓာတ်ဆီစျေးနှုန်းတွေထဲမှာအစွန်းရောက်အပြောင်းအလဲများကိုလိမ့်မည်မဟုတ်တော့မိုဘိုင်းခရီးအလယ်၌ သာ. ပင်ပန်းဆက်ပြောသည်သောအခါအရက်။
တူရကီနှင့် IZMIR DIRECTION
တူရကီဖို့အရှေ့နှင့်ကားတစ်စီးမောင်းသူအနေဖြင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဝင်ရောက် Izmit သစ် Zai နှင့်အတူ 25,75 Raiders နှုန်း output ကိုပေးဆောင်။ Izmir သွားလျှင်, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအတွက်ပိုပြီးစျေးကြီးသည်။ Altınova-Bursa £ 33,50 ကနေမြောက်ပိုင်း, Bursa-Izmir တာဝန်ခံနှုန်းအနောက်ပိုင်းရယူခြင်း 119,75 ၌တည်၏။ TL သေဆုံးသူ Izmir မှ 150 ကိုကျော်လွန်နေပါသည်။
တူရကီ 79,50 နှုန်း YHT
TCDD လည်းမနေ့ကထံမှအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူလက်မှတ်အကောက်အခွန်၏ 20 ရာခိုင်နှုန်းသာကြီးပြင်းလာခဲ့ပါသည်။ Izmit-တူရကီ YHT ခရီးစဉ် TL 66 79,50 TL မှထ။ လည်းမရှိတော့မယ့်အစား TL ၏ 43,50 52,50 TL ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ် Eskisehir သွားပါ။ 19,50 TL မှ YHT အစ္စတန်ဘူလ် Pendik သို့မဟုတ်Söğütlüçeşme Halkalı'' ပု 26,50 သို့မဟုတ် TL ခုနှစ်တွင်သွားကြဖို့။
သေးငယ်တဲ့အချိုးအစားကိုထင်ဟပ်ဖို့ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများအတွက်မီးရထားတိုးမြှင့်။ Izmit နှင့် TL မှစ. အစ္စတန်ဘူလ်ခရီးသည်လိုင်းကြေး 11 11.50, İzmitနှင့်Adapazarıလိုင်းကုန်ကျစရိတ်လည်း TL 10 12 TL မှထ။ ခြောက်လလူငယ်များရာခိုင်နှုန်းဆက်လက် 65 ရထားလက်မှတ်တွေအပေါ် 50 26 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေး၏အသက်ကျော်နိုင်ငံသားများ, 15 နှစ်ပေါင်း discounts ။
NEW ကားလမ်းအခကြေးငွေ (ကား)
3,25 နှုန်း Sapanca
4,25 နှုန်း Adapazari
7,50 နှုန်း Duzce OSB
£ 21,75 ၏ပဒေသာ
4,25 နှုန်း Gebze
TL အစ္စတန်ဘူလ် 6.00
Altınova entry ကို
Bursa မြောက်အမေရိက 33,50 TL
Bursa-Izmir 119,75 အနောက်
KMO Anatolian ကားလမ်း
မြောက်အမေရိက 16,85 ကနေ£Kurnaköyမှတက် Sevindikli
İzmit- Eskisehir £ 52,50
19,50 နှုန်း Izmit-Pendik
103,50 နှုန်း Izmit Konya
-Hare ငါ 30 နှုန်း Izmit (Kuruçeşme)
Izmit သူကို 40 TL (Kuruçeşme) -Old
75 -Ankara နှုန်း Izmit (terminal ကို)
35 နှုန်း Izmit Düzce
50 နှုန်းİzmit Bolu
60 နှုန်း Izmit Zonguldak
တံတား, အဝေးပြေးနှင့်ရထားလက်မှတ်အခကြေးငွေများ Zamlan MI အလိုရှိသနည်း 16 / 04 / 2019 ထို့အပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းများအပါအဝင်အခြေခံအဆောက်အအုံ, ဝန်ကြီးဌာန, PTT နှင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားပို့ဆောင်ရေး၏အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုန်ထမ်း "ငွေစုနှင့်တိုးဝင်ငွေ" ဟုအဆိုပါအစည်းအဝေးပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွင်, တံတား, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်မီးရထားလက်မှတ်တိုးမြှင့်ကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ Related ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်, ကန်ဆောင်မှုင်ငွေအတွက်တစ်ဦးတိုးကိုတိုးပွါးစေဖျော်ဖြေဖို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောသည်: "ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကနိုင်ငံရေးအလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ အပြည့်အဝငွေစုနှင့်ဝင်ငွေ-တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မှုများမပြုမီအချိန်ကနေဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန, လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဤကိစ်စတှငျခြေလှမ်းများယူမေးတယ်။ အားလုံးဝန်ကြီးဌာနများ, အထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဤပြဿနာအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကတစ်ဦး ...
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်တက္ကစီလက်မှတ်ဖိုးများခေါက်ခံရဖို့, ဤတွင်သစ်ကိုအခွန်များမှာ! 28 / 05 / 2019 ဧပြီလထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်တက္ကစီကိုပုံမှန်အတိုင်း။ အဆိုပါ cabbie $46 TL မှစ. အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဇွန်လ 2.50 3.25 TL မိုင်အကွာအဝေးစွဲချက်၏အဆုံးမှတက္ကစီခ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကသမ္မတEyüpနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်တူရကီဇာတိမှာ Aksu အဖွင့်၌ဟောပြောဟုဆိုကာလာပါလိမ့်မယ်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်,3။ လေဆိပ်တက္ကစီကိုပုံမှန်အတိုင်းကိုလည်းတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီကိန်းဂဏန်းဇွန်လကုန် 150 ပေါင်အကြောင်းကိုပါလိမ့်မည်မတိုင်မီBeylikdüzüကိုသွားချင်တဲ့သူများ£ 200 ပေးဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဆိုအရ; "Cabbies ၏အစ္စတန်ဘူလ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (İTEO), 2019 နှစ်ပေါင်းယင်းခရိုင်ခရိုင်ဧပြီလအတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်တက္ကစီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခွန်ကြေညာခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ...
ဤတွင်အပေါငျးတို့သစီမံကိန်းများကိုတူရကီအမျိုး၏မာနတွေဟာ 02 / 03 / 2015 Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်, Marmaray, အစ္စတန်ဘူလ် 3: ဤတွင်အပေါငျးတို့သစီမံကိန်းများကိုတူရကီအမျိုး၏မာနဖြစ်၏။ လေဆိပ်, Yavuz Sultan Selim တံတား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း3ကြမ်းပြင်အကြီးစားအစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီရဲ့မျက်နှာစီမံကိန်းနှင့်အတူပြောင်းလဲနေပါတယ်။ စီမံကိန်း, ကမ္ဘာ့လေးစားရန်သစ်တစ်ခုကို item ထည့်သွင်းခြင်း။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအတွက် 72 ဒီနှစ်ဟာကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုန်ဆောင်မှုများဖြစ်လိမ့်မည်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, မနှစ်က 13 ဘီလီယံခန့် 260 ကျော်ပေါင် Marmaray တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသူတို့နှင့်အတူလုပ်ဆောင်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) ဤသို့သောအသက်, အစ္စတန်ဘူလ်3အဖြစ်အကြီးစားစီမံကိန်းများကိုအပေါ်ခဲ့ရသည်။ လေဆိပ်, Yavuz Sultan Selim တံတား (3 ။ Bridges), ပုအစ္စတန်ဘူလ်-Izmir အဝေးပြေး, ဘာကူ-Tbilisi-Kars မီးရထားလမ်း,3ကြမ်းပြင်အကြီးစားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအစ္စတန်ဘူလ်လည်းဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ...
သစ်တစ်ခု entry ကိုများအတွက်တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပုဂ္ဂလိကပိုင်နူးညံ့မဟုတ်လျှင် 05 / 02 / 2013 တစ်ဦးက New တံတားနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပုဂ္ဂလိကပိုင်မျက်စိအဘို့အတံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပုဂ္ဂလိကပိုင်နူးညံ့နေသမျှကာလပတ်လုံးပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆင့်မြင့်ကောင်စီ (PHC ကို) အတွက်တင်ဒါများကြေငြာချက်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရကူးပြောင်းခဲ့သည်ပြီးနောက် entry ကို re-အကဲဖြတ်နိုင်အဖြစ်။ ပြီးခဲ့သည့်လကအဆိုပါပုဂ္ဂလိကပိုင်နူးညံ့ပါဝင်၏ Nurol ဦးပိုင်တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဂရုတစိုက်အသစ်ကဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်စပ်လျဉ်း Customize ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမည်မြင့်မားရေးကော်မရှင်ကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်။ ကောင်စီ, ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အလီ Babacan ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Mehmet Simsek, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းဝန်ကြီးအာဒိုဂန် Bayraktar ပို့ဆောင်ရေးအတွက်, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မှတ်ချက်တွေပြီးနောက်အသစ်တခုလေလံဖြစ်စဉ်ကို ...
ဤတွင်သစ်ကိုတံတားများလန်ဒန်ဘို့စီစဉ်ထားကြသည် 01 / 07 / 2014 ဤတွင်သစ်ကိုတံတားများလန်ဒန်ဘို့စီစဉ်ထားကြသည်: စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလန်ဒန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, မြစ်ကြီးကို Thames အဆိုပြုထားထောက်ခံသူအရှေ့အသစ်တစ်ခုကိုကားတစ်စီးနဲ့စက်ဘီးတံတားရှာကြ၏။ hok ဗိသုကာနှင့်တစ်ပါးဖြစ်သည့် Arup အသစ်ကတံတားကုမ္ပဏီများကကိုပြင်ဆင် drawings, စက်ဘီးလမ်းကြောင်းများနှင့်ဘတ်စ်ကားမှကျိန် ဆို. ပူဇော်အထူးကိုပြ။ ဗိသုကာထိခိုက်စေရန်လုံလောက်သည့် low-level အတွက်အနီးအနားမှာစီးတီးလေဆိပ်, အဆိုပြုထားတံတားပင်လယ်အသွားအလာအတွက်လုံလောက်သောအမြင့်မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်လန်ဒန်အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလေးအနက်ထားစိတ်သက်သာရာလိုပြောပါ, ထိုမှတ်ချက်ချသည်။ Gallions တံတားအကြားနှင့် Thamesmead အကြံပြုဆန့်ကျင်ဘက်ကမ်းပေါ်ပြုမိလက်လှမ်းမမီ။ ကုန်ကျစရိတ်£ 600 သန်းရောက်ရှိရန်ခန့်မှန်းထားသည်။ အလားတူစီမံကိန်းကိုယခင်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ ...
Cakir CHP: 'ရထားပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအင်စတီကျုဘုတ်အဖွဲ့သင့်ပါတယ်Karabük' '
တံတား, အဝေးပြေးနှင့်ရထားလက်မှတ်အခကြေးငွေများ Zamlan MI အလိုရှိသနည်း
သစ်တစ်ခု entry ကိုများအတွက်တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပုဂ္ဂလိကပိုင်နူးညံ့မဟုတ်လျှင်
တက္ကသိုလ်၏မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဝင်လာသောကျောင်းသားန်ဆောင်မှုများအပေါ် Necmettin Erbakan YHT ကိုပေးသနား
yht'n ကြီးမားတဲ့အတွက်ခရီးသွားရောက်ရှိ၏ဝေစုအတွက် Eskisehir တိုး
ဧည့်သည်အရေအတွက်အပြီး-Konya YHT 13 သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်